RawTherapee 5.8 biara na nkwado maka RAW na usoro CR3 na ndị ọzọ | Site na Linux
RawTherapee 5.8 biara na nkwado maka RAW na usoro CR3 na ndị ọzọ
Izu ole na ole gara aga a mara ọkwa mbipụta ọhụrụ nke RawTherapee 5.8, mbipute na abịa na obere akụkọ, ma otu n’ime ha a na-ahụta dị ezigbo mkpa maka ngwa ahụ ebe RawTherapee 5.8 gụnyere nkwado izizi maka onyonyo RAW na usoro CR3 ejiri mee ihe na igwefoto Canon, yana ụfọdụ mgbanwe ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghi RawTherapee kwesịrị ịma na nke a bụ ngwa nke ahụ na-enye otu ngwaọrụ iji mezie mmegharị agba, dozie nguzo ọcha, nchapụta na iche, yana mmelite onyonyo na arụ ọrụ mkpọtụ ụda.
1 Banyere RawTherapee
2 Kedu ihe dị ọhụrụ na RawTherapee 5.8?
3 Etu esi wụnye ụdị RawTherapee 5.8 ọhụrụ na Liux?
RawTherapee Ọ na-apụta inwe ike ịnwe nkwado iji nwee ike ịkwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke faịlụ RAW, gụnyere ese foto na ihe mmetụta Foveon na X-Trans, ma nwekwara ike ịrụ ọrụ na ọkọlọtọ Adobe DNG yana usoro JPEG, PNG na TIFF (ruo 32 bits per channel).
Ọzọkwa ngwa mejuputa algọridim dị iche iche iji dozie ogo onyonyo, dozie ọkụ, wepụ mkpọtụ, welie nkọwa, lụso onyinyo ndị na-enweghị isi, idozi ihu na echiche, wepu akpaka pikselụ ma gbanwee ikpughe, mụbaa nkọ, wepu ncha na akara uzuzu.
RawTherapee dabere na echiche nke mmezi na-enweghị mbibi, yiri ụfọdụ mmemme mmemme RAW ndị ọzọ.
A na-etinye mgbanwe ndozi na ihe oyiyi ahụ n'oge usoro mbupụ. RawTherapee nwere ike ịrụ ọrụ na RAW faịlụ site na igwefoto dijitalụ, yana ihe oyiyi dị na nhazi. Edere oru ngo a na C ++ na-eji GTK + ma kesaa n'okpuru ikikere GPLv3.
Kedu ihe dị ọhụrụ na RawTherapee 5.8?
Na ụdị ọhụrụ a pụta ìhè Nsonye nke ngwá ọrụ ọhụrụ «Capture Sharpening», que -enye gị ohere na-akpaghị aka naghachi nkọwa furu efu site lens blur (ntụgharị). Capture Sharpening na njikọ nke Post-Resize Sharpening na-enye ohere maka nsonaazụ zuru oke na nkọ.
Ihe omuma ohuru nke puru iche na nke ohuru a bu ntinye nke nkwado mbu maka onyonyo RAW na usoro CR3 ejiri mee ihe na igwefoto Canon. Ruo ugbu a, ọ ga-ekwe omume iwepụta onyonyo site na faịlụ CR3, na anaghị akwado metadata ahụ, mana a na-atụ anya na na nsụgharị ndị ọzọ a ga-emewanye atụmatụ a na ngwa ahụ.
Ọzọkwa eme ka nkwado dị mma maka ụdị igwefoto dị iche iche pụta ìhè, gụnyere ese foto nwere profaịlụ agba DCP nwere isi mmalite ọkụ abụọ na ọkwa ọcha, na mgbakwunye na njikarịcha arụmọrụ nke ngwaọrụ dị iche iche.
N'ikpeazụ, a kpọtụrụ ya na ugbu a na nsụgharị ọhụrụ a njikọ ya na libtcmalloc.so nke na-abịa na ngwaọrụ Google iji dozie nsogbu ebe glibc agaghị alaghachi ebe nchekwa ahụ na sistemụ arụmọrụ.
Etu esi wụnye ụdị RawTherapee 5.8 ọhụrụ na Liux?
Maka ndị nwere mmasị ịnwe ike inweta ụdị ọhụrụ a nke RawTherapee 5.8 can nwere ike nweta a ọhụrụ version site na ịga na ha ukara website ebe ị nwere ike ịchọta installers dị iche iche nke ngwa (Windows, Mac na Linux).
Ya mere, n'ihi anyị ikpe "Linux" Anyị nwere ike nweta ụdị ọhụụ a site na nbudata AppImage nke ya.
Enwere ike ime nke a site na ịmepe ọnụ na ya na-eme iwu na-esonụ:
Emeela nbudata ugbu a, anyị ga-enye ya ikike ikikere na:
Ha nwere ike ịgba ọsọ ngwa ahụ site na ịpị faịlụ abụọ ma ọ bụ site na njedebe na:
N'ihe banyere ndị bụ ndị Ubuntu ọrụ na nkwekọrịta, ha nwere ike họrọ ịgbakwunye ebe nchekwa na sistemụ ha na nke ha agaghị enweta naanị nsụgharị ọhụụ ewepụtara kamakwa ha ga-agwa ha gbasara mmelite ọhụrụ.
Iji tinye ebe nchekwa, dị nnọọ mepee ọnụ na ya ị pịnyere iwu na-esonụ:
N'ikpeazụ, ha na-etinye ngwa ahụ naanị site na ịme iwu ndị a:
Banyere ndị bụ ndị ọrụ Linux Arch, Manjaro, Arco ma ọ bụ nkesa ọ bụla ọ bụla dabere na Arch Linux, ntinye nke ngwa a nwere ike ịme site na ịpị iwu na-esonụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » RawTherapee 5.8 biara na nkwado maka RAW na usoro CR3 na ndị ọzọ
eXtern OS: Ihe nkesa iji nweta ọdịnihu nke GNU / Linux